လီဗာပူး နဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ မရတဲ့ အခွင့်အရေးကို ရခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး ၊ သရေပွဲတွေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဥရောပည ၊ မန်စီးတီး နောက်ကို လီဗာပူး ကပ်လာချိန်မှာ မျှော်လင့်ချက်နည်းသွားတဲ့ စပါးတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
လီဗာပူး နဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ မရတဲ့ အခွင့်အရေးကို ရခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး ၊ သရေပွဲတွေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဥရောပည ၊ မန်စီးတီး နောက်ကို လီဗာပူး ကပ်လာချိန်မှာ မျှော်လင့်ချက်နည်းသွားတဲ့ စပါးတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
February 24, 2022 February 24, 2022 - by Editor
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် နဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းတို့ ၁ ဂိုးစီ သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ဘင်ဖီကာ နဲ့ အိုင်ယက်စ် တို့ ရဲ့ ပွဲဟာလည်း ၂ ဂိုးစီ သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့် ဒုတိယ အကျော့ အတွက် ၄ သင်းစလုံး အခွင့်အရေး ကျန်ရှိလို့ နေကြပါတယ် ။
အိုင်ယက်စ် အတွက် ဂိုးသွင်းပေးခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဆီဘတ်စတီယန် ဟေလာ ကတော့ ချန်ပီယံလိဂ် သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး ၇ ပွဲဆက်တိုက် ဂိုးသွင်းယူ နိုင်တဲ့ ပထမဆုံး ဘောလုံးသမား ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဟေလာ ဟာ မနေ့ညက ပွဲမှာ အိုင်ယက်စ် အတွက် ၁ ဂိုးသွင်းခဲ့သလို သူ့ရဲ့ O.G ကြောင့်လည်း ဘင်ဖီကာ တို့ ၁ ဂိုး ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲကျန်တွေ မှာတော့ လီဗာပူး ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ လိဒ် ယူနိုက်တက် ကို ၆-၀ နဲ့ ဂိုးပြတ် အနိုင် ကစားပြီး မန်စီးတီး ရဲ့နောက် ၃ မှတ်အကွာကို ရောက်ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး အတွက် မိုဟာမက် ဆာလာ က ၂ ဂိုး သွင်းခဲ့ပြီး ဂိုးသွင်း ဘုရင်ဇယား ကို ဆက်လက် ဥိးဆောင်နေခဲ့ ပါတယ် ။
အခြားပွဲတွေ မှာတော့ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ဟာ ဘန်လေ ကို အဝေးကွင်းမှာ ၁-၀ နဲ့ အရေးနိမ့် ခဲ့တာကြောင့် အဆင့် ၄ ဝင်ခွင့် အတွက် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာစေခဲ့ ပါတယ် ။
စပါး နည်းပြ ကွန်တီ ကတော့ သူဟာ ထင်သလောက် မကောင်းသူ တယောက် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင် ပါတယ်လို့ ပွဲ အပြီးမှာ ပြောဆို သွားခဲ့ပြီး စပါး ရဲ့ အခြေအနေ အပေါ် စိတ်ပျက်နေမှု ကို အထင်းသား မြင်တွေ့ ခဲ့ရပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေမှာ ကလပ် ကမ္ဘာ့ဖလား ချန်ပီယံ အမှတ်တံဆိပ် ကို တပ်ဆင် ကစားဖို့ ခွင့်ပြု ချက် ရရှိ ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဒါဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းတွေထဲမှာ ပထမဆုံး ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ တုန်းက မန်ယူနိုက်တက် ၊ ၂၀၁၉ တုန်းက လီဗာပူး တို့ဟာ ကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလား ချန်ပီယံ တံဆိပ်တွေကို တပ်ဆင်ကစားဖို့ ခွင့်တောင်းခံ ခဲ့ကြပေမယ့် မရရှိ ခဲ့ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဖူလ်ဟမ် အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ ဆားဘီးယား တိုက်စစ်မှူး မီထရိုဗစ် ဟာ မနေ့ညက ပွဲစဉ်မှာ ဂိုးသွင်းယူ ခဲ့ အပြီးမှာတော့ ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲ သမိုင်း တလျောက် တရာသီ ဂိုးသွင်း အများဆုံး အဖြစ် ၃၂ ဂိုးနဲ့ စံချိန်သစ် တင်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
လက်ရှိမှာ ချန်ပီယံရှစ် ရာသီ မကုန်သေးဘဲ ၁၄ ပွဲ ကစားဖို့ ကျန်ရှိနေပါသေးတယ် ။
ဒေါ့မွန် အသင်းရဲ့ CEO က သူတို့ ဟာ တိုက်စစ်မှူး ဟာလန်း ရဲ့ အနာဂါတ် ကို လာမယ့် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် အတွင်း ညှိနှိုင်း လုပ်ဆောင် သွားမယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မေဂျာလိဂ် ကလပ် တိုရွန်တို အသင်းဟာ ဂျီနိုအာ အသင်းခေါင်းဆောင် ဒိုမီနီကို ခရစ်စီတို ကို ခေါ်ယူဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ်
မေဂျာလိဂ် မှာ ကစားနေတဲ့ အာဂျင်တီးနား တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဟီဂွာအင် က မက်ဆီ ကို အမေရိက ကို လာရောက် ကစားဖို့ ပြောဆို တိုက်တွန်း သွားမှာ ဖြစ်ပြီး မေဂျာလိဂ် နဲ့ အမေရိကန် ကို မက်ဆီ နှစ်သက် ပျော်ရွှင် လိမ့်မယ် လို့လည်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး နည်းပြကြီး ကလော့ က ဂျိမ်းစ် မေနာ ရဲ့ စာချုပ်သစ် ကိစ္စ ဟာ ကာယကံရှင် အပေါ်မှာပဲ အဓိက မူတည်နေပြီး သူကတော့ မေနာ ကို စာချုပ်သစ် ချုပ်စေလိုကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
သြစတြီးယား ကလပ် ရက်ဘူး ဆဲဘတ် အသင်းဟာ လာမယ့် ရက်သတ္တပတ် ရဲ့ ကြားရက်မှာ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဒုတိယ အကျော့ ကစားဖို့ ရှိနေ ပေမယ့် အသင်းသား ၁၅ ယောက်အထိ ကိုဗစ် ကူးစက် ခံနေရတာကြောင့် အခက်တွေ့ နေရတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အင်တာမီလန် အသင်းဟာ လာမယ့် နွေရာသီမှာ မန်စီးတီး တိုက်စစ်မှူး ဂါဘရီရယ် ဂျေဆူး ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး နေပြီး မန်စီးတီးထံ အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး လူတာရို မာတီနက် ကို ဝယ်ယူဖို့ ကိုလည်း ကမ်းလှမ်းဖွယ် ရှိတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
Previous Article လိဒ်ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်အပြီး သူ့ရဲ့အောင်ပွဲခံမှုနဲ့ပက်သက်ပြီး ၀န်ခံသွားခဲ့ကာ title race နဲ့ မာတစ်ရဲ့ ဂိုးအပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ကလော့
Next Article စံချိန်မှတ်တမ်း များစွာ နဲ့ လိဒ် ယူနိုက်တက် ကို အနိုင်ယူပြလိုက်တဲ့ လီဗာပူး